वर्लिन : जर्मनीमा ८ दिनदेखि हराइरहेका एक बालक ढलमा जीवितै फेला परेका छन् । बीबीसीका अनुसार जोइ नामले चिनिने ती बालक १७ जुनमा पारिवारिक बगैंचाबाट हराएका थिए । जसका कारण प्रहरीले उनको ठूलो खोजी गरेको थियो । उनी २५ जुनमा बिहान फेला परेका थिए । एक पैदलयात्रीले ढलको ढकनीको प्वालबाट
काठमाडौं : वर्षे झरीले धेरैलाई सताउँछ । कतिखेर मौसम परिवर्तन हुन्छ अत्तोपत्तो हुन्न । क्षणभरमै पानी पर्न थालिहाल्छ । क्षणमै गर्मी । त्यसैले यो मौसमलाई वर्षातको मौसम पनि भनिन्छ । वर्षातको मौसममा लामखुट्टे, झिँगा लगायतले रोग सार्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । फिजिसियन डा। लोचन कार्कीका अनुसार यो समयमा बालबालिकालाई
काठमाडौँ : बुधबार बिहान साढे ८ बजेतिर प्रदीपजंग क्षेत्री गौशाला चोकमा ट्राफिक जाममा अड्किरहेका थिए । उनको नजर आफूभन्दा ठीक अगाडि रहेको दुई वटा पल्सर मोटरसाइकलमा पर्‍यो । दुवै मोटरसाइकलमा एउटै नम्बर थिए । पानी परिरहेकाले सवारी चालकले रेनकोट लगाएका थिए । तर मोटरसाइकलमा बागमती प्रदेश ०२ ०२२ प २३८०
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिएको प्रशासनिक तथा प्राविधिकतर्फको १०२ पदको परीक्षामा सबै परीक्षार्थी अनुतीर्ण भएका छन् । आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको उपप्रशासक, शाखा अधिकृत, मुख्य कार्यालय सहायक, आर्थिक उपनियन्त्रक र लेखा अधिकृत पदको खुलातर्फको परीक्षामा एकजना पनि परीक्षार्थी उतीर्ण हुन सकेनन् । उपप्रशासक पदमा ४ जनाको माग गरिएकोमा
लमजुङ : मर्स्याङ्दी गाउँपालिका ५ माथिल्लो चिप्लाका बासिन्दा तीन दशकदेखि पहिरोको त्रासमा दिन बिताउँदै आएका छन् । पहिरोले गाउँ च्याप्दै लगेपछि स्थानीय बसाइँ सर्न बाध्य बनेका छन्। अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञले उक्त गाउँ सार्न सिफारिस गरेपनि पुनर्स्थापनाको लागि कुनै कार्य नभएको स्थानीय कुमीरजंग गुरुङले बताए । उनले भने, ुपानी परेसँगै पहिरो
गण्डकी : शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकीप्रदेशको सहयोग एवं महेश (संन्यास (आश्रम (रामानन्द अनुसन्धान केन्द्र) को आयोजनामा आयोजित पञ्चदिवसीय अनुसन्धानात्मक कार्यशाला गोष्ठीमा मंगलबार दोस्रो दिनको महत्त्वपूर्ण अध्याय सफल बनेको छ । ब्रह्मचारी ईश्वरानन्दको अध्यक्षतामा द्वितीय दिवसका तीन सत्रहरू महेश सभाकक्षमा भएका हुन् । गव्याचार्य डा. नरेन्द्र
काठमाडौँ : याक, नाक तथा चौरीको बीमामा नेपाल सरकारको अनुदान बाहेक बीमीतले बुझाउने बीमा शुल्कमा १५ प्रतिशत छुट प्रदान गर्न याक तथा चौंरी व्यवसायी संघ र आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । मंगलबार याक तथा चौंरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष नुरु शेर्पा र आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला खत्री वलीले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । उनले आफ्नो राजीनामा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाएको स्रोतले दावी गरेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले आफूले पनि वलीले राजीनामा बुझाएको थाहा पाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझ्न गएको बताए । जेठ अन्तिममा दाङका वाईसीएल
काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का नवनिर्वाचित पदाधिकारलाई फिफा विश्वकप २०२२ आयोजक राष्ट्र कतारको फुटबल संघले बधाई तथा शुभकामना दिएको छ । ६ असारमा भएको एन्फा चुनावी साधारण सभामा निवर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई ६ मतले पराजित गर्दै पंकजविक्रम नेम्वाङ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उनलाई बुधबार पत्र काट्दै
यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? बाढी र पहिरोका कारण आज यी सडक छन् अवरुद्ध..
काठमाडौं : अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोका कारण आज देशका विभिन्न सडकहरु अवरुद्ध भएका छन् । सडक अवरुद्ध हुँदा सवारी आवमगन प्रभावित भएका छन् । उदयपुरको चादण्डीगढी नगरपालिका–१० र खैराझोडा–९ ज्यामिरे खोलामा आएको बाढी सडकमै बगेका कारण आज बिहान ५ बजे बाट सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ । अविरल